Mogadishu Journal » 2021 » January » 31
Ciidamada Gaashaan oo gudaha u galay Hotel Afrik iyo Wararkii Ugu Dambeeyay
Muqdisho:-Waxaa wali gudaha Hotelka Afrik ee magaalada Muqdisho ka dhax dagaalamaya dagaalyahano katirsan Al Shabaab oo galabta weerar qorsheesan gudaha ugu galay dhismaha Hoteelkaasi ay joogeen saraakiil iyo dad kala duwan oo shacab u badnaa. Weerarka kadib waxaa Hotelka gaaray...
Wararkii Ugu Dambeeyay Weerarkii lagu qaaday Hotelka Afrik iyo rasaas wali socota
Muqdisho:-Weerar isugu jiray Qarax gaari loo adeegsaday iyo weerar toos ah ayaa lagu qaaday hotelka Afrika ee kuyaala agagaarka Isgooska KM-4 ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Koox hubeesan oo banaanka Hotelka ku...
Weerar Ismiidaamin iyo mid toos ah oo lagu qaaday Hotel Afrik iyo Rasaas socota
Muqdisho:-Weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah ayaa goordhaw lagu qaaday Hotelka Afrik ee kuyaala agagaarka Isgooska KM ee magaalada Muqdisho. Sida aan wararka ku helnay qaraxa kadib ayaa dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al Shabaab waxa ay gudaha u galeen gudaha hotelka...
Barcelona ayaa beenisay heshiiska Messi
Barcelona ayaa "gabi ahaanba beenisay wax masuuliyadeed" faahfaahinta heshiiska Lionel Messi ee ku dhacay gacanta El Mundo. Faahfaahinta qandaraaska Lionel Messi ee noqoshada aqoonta guud ma aysan aheyn qaladka Barcelona, ​​kooxda LaLiga ayaa sheegatay. Warbixin ay daabacday El...
Police ramp up pressure on opposition with arrests and criminal probes as Navalny allies gather for new protests.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.436.0_en.html#goog_1836420738Play Video31 Jan 2021 Russian police detained hundreds of protesters on Sunday as activists...
Jubbaland oo war kasoo saartay Kulankii dhax maray Axmed Madoobe iyo Swan (Sawiarad)
Kismaayo:-Madaxweynaha Dowlada Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta qasriga Madaxtooyada ku qaabiley Ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya mudane James Swan iyo Madax ka socotey Hay’adaha Qaramada Midoobey sida UNHCR, WFP, FAO iyo WHO. Kulanka Madaxweynaha oo ay ku...
FARMAAJO oo soo saaray QODOB ka hor imanaya matalaadda G/BANAADIR
Muqdisho:-Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray war-saxaafadeed ka kooban shan qodob, kaasi oo uu ku iclaamiyey shir lagu xalinayo arrimaha ku hor gudban doorashada Soomaaliya kadib kulan uu la qaatay Beesha Caalamka. Qodobadaas uu soo saaray madaxweynaha waxaa...
James Swan iyo Wefdi la socday oo lagu soo dhaweeyay Kismaayo (Daawo Sawirada)
Kismaayo:-Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Kismaayo, waxaana garoonka Diyaaradaha kusoo dhaweeyay Madax katirsan maamulka Jubbaland. James Swan iyo wefdiga la socday ayaa soo...
Dowlada Turkiga oo baaq la xariira Iran u dirtay maamulka cusub ee Mareykanka
Turkey ayaa Mareykanka ugu baaqday inuu dib ugu soo laabto heshiiska Nukliyeerka Iran, islamarkaana uu cunaqabateenada ka qaado Jamhuuriyada Islaamiga ah, taasi oo dhabbaha u xaareysa ganacsi horumarsan oo dhex-mara labada dal ee deriska ah. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa...
Qaramada Midoobay oo War kasoo saartay Shirka ay isugu imaanayaa DF iyo Maamulada
Muqdisho:-Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka ay mar kale isugu imaanayaan Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee looga arinsanayo khilaafka doorashada ka taagan. Qoraal kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee...
Muqdisho:-Dadaalka loo galay ka miro dhalinta arrinta ku saabsan metelaada gobolka Banaadir ee Aqalka sare ma aheyn mid hadda bilowday, Hadal heynta ku saabsan maqaamka iyo matalaada gobolka Benaadir waxay aheyd mid muddo dheer soo jiitamaysay oo afka baarkiisa aan soo dhaafin,...